तेस्रो पटक ‘आमा’ बन्दै, ‘पशुपति प्रसाद’ जस्तै उत्कृष्ट बनाउने दिपेन्द्रको भनाई
लेन्सनेपाल २०७६ बैशाख २५
तेस्रो पटक ‘आमा’ नाममा चलचित्र बन्ने भएको छ । नेपालकै पहिलो चलचित्र ‘आमा’ २०२२ मा प्रदर्शन भएको थियो भने २०५३ सालमा पनि ‘आमा’ नामको चलचित्र प्रदर्शन भएको थियो । पहिलो चलचित्रलाई हिरासिंह खत्रीले निर्देशन गरेका थिए भने दोस्रोलाई रेसराज आचार्यले । अब भने तेस्रो पटक यही नाममा चलचित्र बन्न लागेको छ । जसलाई दिपेन्द्र के. खनालले निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच चलचित्र निर्माणको घोषणा गरिएको छ । ‘आमा’ र छोरीको कथा भन्ने चलचित्रको लेखन र छायाँकनको जिम्मेबारी पनि निर्देशक स्वयम्ले नै बहन गर्नेछन् । कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक खनालले दर्शक र समीक्षक दुबैलाई मनपर्ने चलचित्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसअघि आफुले बनाएको ‘पशुपति प्रसाद’ जस्तै उत्कृष्ट चलचित्र बनाउने उनको भनाई छ ।
चलचित्रमा ‘आमा’को भुमिकामा सुर्यमाला खनाल र छोरीको भूमिकामा सुरक्षा पन्त अनुबन्धित भएका छन् । यसका साथै देशभक्त खनाल, सरिता गिरी, आशान्त शर्मा, मनिष निरौला, पदम बुढालगायतका कलाकार पनि अभिनय रहने छ । चलचित्रमा भुपेन्द्र खड्काको गीत रहने छ । जुन गीतलाई ४–५ जना संगीतकारले कक्पोज गर्ने र जसको उत्कृष्ट बन्छ त्यसैलाई समावेश गर्ने जनाइएको छ ।
डिएस डिजिटलको ब्यानरमा शर्मिला पाण्डेले निर्माण गर्ने चलचित्रको सहनिर्माता सन्तोष अधिकारी हुन् । चलचित्रको छायाँकन असार दोस्रो साताबाट सुरु हुने र फागुन ९ गते प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।
तीज म्युजिक अवार्ड को मनोनयन सार्वजनिक
तामाङ चलचित्र तिल्दा..? को ट्रेलर सार्वजनिक
‘पासवर्ड’को ट्रेलर सार्वजनिक
'जाइरा' प्रस्तुति, स्टाइल अनि एक्सनले बिशेष - नम्रता श्रेष्ठ
‘च च हुई’को ‘सिल्की सिल्की’ सार्वजनिक
प्रलाद शाहको 'चानचुन पैसा' सार्वजनिक
New Releases (Bhadra 6)
Director : Ashutosh Raj Shrestha
Casts : Namrata Shrestha, Anoop Bikram Shahi, Pramod Agrahari, Srijana Regmi, Raymon Das Shrestha
Next Releases (Bhadra 20)
Director : Prabhakar Prakash
Casts : Neeta Dhungana, Prajwol Giri